SomaliaReport: Asalka Ururka Ahlu Sunnah ee Guriceel
Ururka qunyar-socodka ah ee Ahlu Sunnah Wal Jamaca (ASWJ) waa ururka kaliya ee guulo la taaban karo iyo horumar taabo gal ah ka keenay dagaaladii ay gobalada dhexe ee Soomaaliya kula galeen ururka mayalka adag ee al-shabaab, maamulkooda goboladan dhexe ayaa ahaa mid ku baahsan meelo badan khaas ahaan Galgaduud iyo Hiiraan.
Wargayska Somalia Report ayaa si ay uga sal gaadho bilowgii iyo marxaladihii ururkan ASWJ waraysi la yeeshay Macalin Mahdi Maxamed Diini oo ah aasaasaha qaybta Guriceel.
“Markii hore waxaan ahaa macalin dugsi quraan markii ay ururka al-Shabaab masaajid ka samaysteen magaalada Guriceel sanadkii 2008ka halkaas oo aan ogaaday in ururkani uu dadka baro falsafad khaldan oo ku salaysan inay jiraan saddex nooc oo tawxiid ah (mid ka mid ah tiirararka islaamka).” Mahdi ayaa sidaa yidhi.
“Ururku wuxuu sii watay fidinta falsafaddaa khaldan sidaa darted maalin maalmaha ka mid ah ayaan booqday masaajidkooda oo ku dhawaa dugsiga aan qur’aanka ka dhigi jiray, waxaanan kala dooday arimahan, laakiin cid I dhagaysatay ma jirin. Muddo ka dib waxaa iga soo gaadhay saraakiisha Al-Shabaab inaan ahay Murtad (qofka diinta ka baxa), sidaa darteedna aan ciqaabteeda heli doono’’. Mahdi ayaa intaa sii raaciyey.
Mahdi wuxuu yidhi “Waa la I xidhay waana la I baadhay aniga iyo asxaabtaydii kaleba,in yar ka diban waxaa xoog lagu soo galay dugsigaygii aan qur’aanka ku bari jiray, balse taasi waxay ahayd tallaabo xun oo a qaadeen”.
Sheekh Mahdi wuxuu yidhi “Shacabkii deegaanka Guriceel ayaa bilaabay banaanbaxyo aan hubaysnayn oo ay ku dalbanayaan in nala sii daayo, markii muddo ka dib nala sii daayey ayaan aniga, iyo dhalinyaro kale oo ay weheliyaan oday-dhaqameedyadii magaalada go’aansanay inaan aadno magaalada Bali Hawd oo illaa 60Km u jirta magaalada halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil sare oo ka tirsan Ahlu Sunna Wal jamaaca.”.
Mahdi wuxuu sheegay inay saraakiishaa Ahlu Sunnah ay ku dhiirogaliyeen inay magaalada Guriceel ka sameeyaan qaybta dariiqada Suufinimada.
Kolkaan safarkeenii ka soo noqonay ayaa samaynay laantii ururka Ahlu Sunna, waxaanan ka koobnayn ilaa 70 qof oo aan haysan saanad milatari, waxa kaliya aan haysanayna wuxuu ahaa qoriga AK47-ka, balse waan ka adkaanay waxaanan askarta al-shabaab ka dilnay ilaa dhawr qofood.
Guulo badan oo dhawr bilood ah ka dib ayey shacabka deegaanka Guriceel na siiyeen taakulayn iyo qalab, ayuu yidhi Mahdi. Taasina waxay kaliftay inaan horay u sii socono oon la wareegno magaalooyinka dariska ah sida Dhuusomareeb.
Al-Shabaab ayaa iyadu ku tilmaanta ururka Ahlu Sunna kuwo qabuuro caabudeen ah. Waxaa kale oo uu ururku aaminsan yahay inay shareecada islaamku qabto burburinta mawlacyada suufiyada, sidaa darted ayey burburiyeen mawlacii Macalin Sheekh Nuur Xuseen oo ku yiilay Shabeelada hoose. Waxaa kale oo uu ururkan al-Shabaab ku eedeeyaa Ahlu Sunah inay garab ka hesho waddamada galbeedka.
Ururka Ahlu Sunnah ayaa hadda gacanka ku haya Guriceel, dhuusomareeb,Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Waxayna magaalooyinkan kala wareegeen ururka al-Shabaab.